Ilaah & Ruuxiga ah - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Ilaah & Ruuxi ah
Waa maxay iftiimin?
Iftiimintu waa qirasho buuxda oo qofka naftiisa ah. Waxay lamid tahay shidashada guluubka nalka ee qofku horey ugu haysto gudaha. Wadada loo maro ...
Waa maxay baraarujinta ruuxiga ah?
Waa maxay ruuxu?
Maxay dadku ugu wareersan yihiin markay Ilaah u noqoto?
Maxay tahay waddo lagu muujiyo jacaylka Ilaah?
Nooca - Ilaah & Ruuxi ahaaneed
Ilaahay muxuu yahay?
Masiix masuulaa masiibada?
Sidee daahirnimada Eebbe loo ogaan karaa?
Maxaa ilaaha kala duwan loo caabudaa?
Ma qalad baa in Ilaah loo cadhoodo?
Muxuu Ilaahay mucjisooyinka u adeegsadaa si gaabis ah?
Sidee sayniska iyo ruuxi ahaan isugu xiran yihiin?
Waa maxay rajooyinka Ilaah ee nolosha?
Waa maxay dabeecaddu?
Waa maxay calaamadaha?
Waa maxay muujinta?